Imibono Yezifanekiso ZeRoblox Shirt (2020) - Manje Dala Ihembe Lakho - Ukudlala
URoblox uyipulatifomu eku-inthanethi eletha abadlali abavela emhlabeni wonke ndawonye. Abadlali bangadlala imidlalo ehlangene ye-3D futhi benze imidlalo yabo. Kanye nokuvumela abasebenzisi ukuthi benze ukuzijabulisa, isici esidumile yizembatho zeRoblox. Ukudalwa kwezingubo kuRoblox kuyindlela enhle yokubandakanya kubuciko obuthile futhi kukhombise uhlangothi lobuciko echibini elikhulu labadlali.
Ngaphezu kwalokho, ukudala izingubo ezipholile kusiza abadlali ukuthi bathole amathuluzi ahlukile kanye nesoftware abangayisebenzisela izinhloso ezingaphezu kukaRoblox. Wonke umuntu uzokwazi ukubona imvunulo yakho yokudala. Ungakhetha ukuzidayisela nakwabanye abadlali.
Siyini isifanekiso seRoblox Shirt?
URoblox unikeza indlela epholile yokwenza ngezifiso ama-avatar wephrofayili yomsebenzisi ngezikibha zawo zama-template, amahembe, namabhulukwe. Izingubo ezenziwe ngezifiso ze-avatar yakho ziyindlela yokudala yokubonisa iphrofayili yakho kuleplatifomu ephelele. Ngaphezu kwalokho, zikusiza ukuthi ufunde ngamasu wehluzo ze-3D nemifanekiso.
Kufanele ube yilungu le-Builders Club laseRoblox ukudala ithempulethi yakho yehembe namabhulukwe. Kepha ungakhathazeki, ungaklama isikibha sakho usebenzisa izifanekiso ezitholakala mahhala.
Lo mbhalo uhlinzeka ngendlela yokuhamba kancane ukukusiza ukuthi wakhe ithempulethi yakho yehembe leRoblox.
Ngabe iRoblox ivumela ama-FPS Unlockers?
Imibono yokwenza i-Custom Roblox Shirt yakho:
Kungaba nzima ukuthola ugqozi lokwenza iRoblox Shirt yakho. Kulo mhlahlandlela, sizokusiza ngayo yonke inqubo. Ake sibheke eminye yemibono emihle kakhulu yeRoblox Shirt. Lokhu kungasiza ngenkathi kuklanywa amaRoblox Shirts akho.
1. Dlulisa amehlo ku-Pinterest
I-Pinterest yikhasi langaphambili le-inthanethi uma kukhulunywa ngokuqukethwe. Banomtapo omkhulu wezithombe.Ungasesha imibono yehembe kaRoblox kalula. Kunezinhlobo eziningi zama-T-shirts. Lokhu kuzuzisa abasebenzisi abaqala ngokuklama.
Ukudalwa kokuqukethwe kweRoblox kulula, kepha imibono yilokho okubalulekile. Amathani abasebenzisi endaweni yesikhulumi babelana ngemicabango yabo. Ilungele abasebenzisi abajabulela ukubuka ama-avatar.
Isisekelo sehembe yisifunda esiphakathi. Yonke imibono eyinhloko yokuklama ifanele lesi sifunda. Abasebenzisi bangangeza izici ezahlukahlukene kule nqubo.
Siphakamisa ukuthi uqale usebenze ku- isikhungo . Kuyazuzisa kulabo abanombono othile engqondweni. Kuzovela ekubonisweni njengoba ukhombisa umlingiswa ku-inthanethi.
3. Thola uhlobo
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zamahembe atholakalayo endaweni yesikhulumi. Ungathola uhlobo lwehembe lomlingiswa ngokuthola uhlobo lwakho. Imidlalo nayo idlala indima enkulu kulokhu.
Uma ufuna umlingiswa opholile futhi opholile, khona-ke amabhishi neminye imibono yehembe yinhle-abasebenzisi abafisa ukuthi umdlalo ubukeke ulusizo kulwazi lwabo. Ukulwa kwempi nokulwa imidlalo kujabulisa ngehembe le-camo.
Ungasenza kanjani isifanekiso seRoblox Shirt?
Amathempulethi weRoblox Shirt ayindlela enhle yokwenza amaShirt akho ngendlela oyifisayo. Kukuvumela ukuthi ungeze emphakathini. I- Imali kaRoblox iqhubekela phambili ngokuqonda okuyingqayizivele nsuku zonke. Abasebenzisi bangenza imiklamo eyingqayizivele yokwengeza ohlwini lwabo. Kulesi sigaba, sizohlola ukuthi ungazakha kanjani izikibha ezimangalisayo emdlalweni.
Ungalanda izifanekiso ezitholakala kusistimu yakho. Ngemuva kwalokho, hlela futhi wenze ngezifiso usebenzisa i-graphic software efana ne-Adobe Photoshop, i-MS Paint, noma i-GIMP.
Izembatho zamahhala neziqonde kakhulu yisikibha esisetshenziswe ngaphambili kwe-avatar. Yize benezici ezinomkhawulo, usengabonisa ubuhlakani bakho. Ithempulethi yamahembe namabhulukwe lisongwa lizungeze wonke umzimba we-avatar, lenze iphrofayili yakho ibe nomthelela nakakhulu.
Ngenkathi kuklanywa, kufanele kuthathwe ukunakekelwa okukhethekile ukulungisa ingxenye ngayinye yethempulethi (Kwesobunxele, Kwesokudla, Ngaphambili, nangaphansi). Futhi, amanye ama-avatar afana ne- 'Circuit Breakers' awavumeli izingubo eziklanyelwe.
Ukulayishwa kwesifanekiso kwehluleka amahembe namabhulukwe uma ubukhulu obulayishiwe bunganembi.
Ukwenza isikibha -
Umtapo wolwazi wezingubo zeRoblox unikela ngesifanekiso seT-shirt sokuklama i-avatar yakho mahhala. Ngokufanelekile, isithombe samaphikseli ayi-128 * 128 silungele ukusetshenziswa ngaphambili kwe-avatar.
Nazi izinyathelo okufanele uzilandele ukwakha umklamo omuhle kakhulu weT-shirt wephrofayili yakho.
Iya ekhasini le- 'Roblox T-shirt template'.
Gcina isifanekiso ku-PC yakho.
Vula bese uhlela isifanekiso usebenzisa isoftware yokuhlela isithombe. Ungasebenzisa amathuluzi atholakalayo noma isoftware ye-premium ngokwesidingo sakho. I-Lightroom, i-Photoshop, ne-GIMP 2 ngezinye zezinketho ongazama.
Sebenzisa amathuluzi akho wokuqamba nokuhlela isithombe ukuthuthukisa ithempulethi. Ungangeza uphawu noma ufake igama elihlekisayo ku-avatar yakho. Ungathatha futhi usizo kusuka kwizifundo eziningana zamavidiyo ukwenza isithombe esithandekayo sephrofayela yakho.
Namathela osayizi bethempulethi. Ingxenye engaphambili nangemuva ye-avatar idinga ukuba ngamaphikseli ayi-128 * 128. Izingxenye ezingakwesokunxele nezingakwesokudla zidinga ukuba ngamaphikseli angama-64 * 128.
Izingxenye ezingenhla nezingezansi zomzimba wakho kufanele zibe ngamaphikseli angaba ngu-128 * 64. Isikwele esincane samaphikseli angama-64 * 64 siyingxenye yengxenye ephezulu nengaphansi yengalo noma yomlenze.
Gcina umklamo wakho, futhi usukulungele ukulayisha.
Ukulayisha i-Design -
Yonke ithempulethi kufanele ibuyekezwe ngumengameli ngaphambi kokuphothulwa.
Zulazula uye kwiwebhusayithi yeRoblox dala ikhasi . Khetha inketho kuma-T-shirts, amabhulukwe noma ihembe. Udinga ukubhalisa ngokukhokhela amahembe noma amabhulukwe.
Chofoza inkinobho ethi 'khetha ifayela' bese ulayishe ukwakhiwa kwakho. Nikeza igama lakho ku-avatar yakho oyilayishile.
Lapho omengameli sebekwamukele ukwakhiwa, kuzobonakala endalweni yakho. Ungayisebenzisa leyo avatar noma uyithengise emphakathini wabadlali beRoblox.
Ezinye izingqinamba ezivamile:
Ayikwazi ukulayisha isifanekiso sesithombe:Qiniseka ukuthi imininingwane yosayizi ilungile futhi iqanjwe kahle.
Isikhathi sokuvunywa:Akuthathi ihora noma amabili ukuvunywa kwesifanekiso ngabengameli. Qiniseka ukuthi ifomethi yesithombe efanele njenge-jpeg, png, ne-BMP.
Ungathengisa izingubo ngaphandle kobulungu?- Cha, Udinga ubulungu be-Builders Club ukuthengisa noma ukubiza ama-avatar.
URoblox uvumela ukumisa igama kanye nencazelo yesifanekiso ukuze abantu bazihlole. Ungasetha inani bese ukhangisa ngezingubo zakho zeRoblox, ezisebenza amahora angama-24 ngaphambi kokunyamalala.
Ngiyethemba ukuthi lesi sifundo sinikeze incazelo eningiliziwe yokwakha isikibha sakho esenziwe ngokwezifiso mahhala kuwebhusayithi yeRoblox. Izambatho zeRoblox ziyindlela enhle yokwenza i-avatar eyingqayizivele ye-akhawunti yakho futhi uthole ukuthandwa phakathi kwamalungu omphakathi.
URoblox uqinisekisiwe ngokuzijabulisa ngemidlalo eminingi emangalisayo, umuzwa wokudlala we-3D, kanye nokuxhumana nabantu lapho abasebenzisi bengabonisa imvelo yabo efihlekile yokudala.
URoblox ku-Chromebook - Kungenzeka?
Izindlela ezi-10 ezihamba phambili ze-iTunes Ngo-2020
i-motherboard engcono kakhulu ye-ryzen 5
ama-movie amahle kakhulu ku-inthanethi mahhala
ithebhulethi ehamba phambili yokusakazwa bukhoma
imifudlana yama-movie yamahhala ayibhalisi
bukela ama-movie wama-2016 wamahhala angabhalisi